Tsvaga iyo Dolce Diva muunganidzwa naKiko Milano yezhizha | Bezzia
Dolce Diva muunganidzwa naKiko Milano yezhizha rino
Susana Garcia | | Runako, Zvigadzirwa zverunako
Kiko Milano imwe yemafemu edu aunofarira uye anogara achitiratidzira kuunganidzwa kutsva kwakakwana kunakidzwa nenguva yega yega. Ino nguva anotiunzira muunganidzwa wakafemerwa nezhizha, mune yakasarudzika zhizha pamhenderekedzo yeMediterranean inonzi Dolce Diva. Kugadzira pamwe nekufemerwa kweItari kunokodzera kumabhajeti ese anotinunura mweya yezhizha.
La Dolce Diva muunganidzwa unofuridzirwa nekugara kusingagumi iyo yakasvibisa iyo Italian Dolce Vita. Mune maunganidzwa aya tinogara tichiwana zvigadzirwa zvinoverengeka, zvitsva, matoni makuru uye zvigadzirwa uye mhando yakanaka pamitengo isingadhuri, saka zvakakodzera kuti uone zvese zvaunogona kutipa.
1 Nei tichida iyo Dolce Diva muunganidzwa
2 Zvigadzirwa zvemeso
3 Simbisa maziso ako
4 Dolce Diva miromo miromo
5 Zvipikiri zvinopenya
Nei tichida iyo Dolce Diva muunganidzwa
Iyi yekuunganidza inofuridzirwa neiyo nzira yeItaly, iri yakashongedzwa neyekare uye inokatyamadza kubata panguva imwe chete. Iko kuunganidza kune makuru echinyakare akadzoreredzwa, kuti apfeke netaera zhizha rino. Kubata kunoyevedza kunotsvakwa muchidimbu chimwe nechimwe, kunyangwe mupakeji yacho. Mafomula ane kudzivirira kwezuva, chimwe chinhu chakakosha kwazvo muzhizha, patinofanira kuzvitarisira muzuva kupfuura nakare kose. Mukuwedzera, iyo inogara kwenguva refu uye haina mvura.
Inotanga tsika kugadzirira ganda rako neKufambisa Chiso Fluid iine chinhu chinodzivirira chezuva che50 chinodzivirira ganda rako kusvika pakakwirira. Inopa iyo ganda kubata kwechisikigo uye kunovhenekera, ichiigadzirira kuti ishandise nhanho inotevera. Iyo furuidhi hwaro ine chinhu 30 Nyowani Inonzwa Foundation ine akati wandei mumvuri uye inoshanda kuti iwane yunifomu toni pane iro ganda. Iyo inotsvedza yemvura inodzivirira inokwanisa kufukidza kusakwana uye nehupamhi hwehupfu isu tinokwanisa kuratidza maficha nekuvhenekesa dzimwe nzvimbo. Iyo yakabikwa bronzer inoyevedza yekuzvigadzira-ganda ine kupera kwakapfava, kwakakwana kune ino mwaka wezhizha.
Simbisa maziso ako
Maziso ndiwo mamwe emativi akatanhamara patinoisa pamakeapu. Iyo yekusarerekera ziso chigadziko ndicho chakakwana chigadzirwa kutanga kuisa pameso edu, kubatanidza iyo makeup. Iyo pa eyeshadow palette inotipa yakanaka mimvuri ine yepasi mavara, epingi epinki uye zvishoma kupenya, kuti ipe iyo kubata kweyekunaka. Pedzisa kugadzira kwako neye eyiner uye isapinda mvura mascara. Sezvo tsiye dziriwo chikamu chakakosha, mune ino muunganidzwa tine dudziro yeseri, tsiye inotsanangudza neyekushandisa nyore iyo zvakare isina mvura.
Dolce Diva miromo miromo
Muzvigadzirwa zvemiromo tichawana zvipfeko zvitatu zvekutora nhanho dzekuwana nadzo miromo yakakwana. Unofanira kutanga washandisa iyo kukwesha miromo, kukwesha muromo kunovasiya vanyoro. Mushure mezvo, balm yemuromo inodzivirira inoiswa nehusiku hwezuva sehwaro. Chekupedzisira, isu tinofanirwa kuisa iyo inogara kwenguva refu lipstick kuti tiwane inogara-refu miromo mune mumvuri kubva kubva wakanyanya kutsvuka kusvika ku pink kana mauve. Makuru echinyakare ekugadzira nayo miromo yako ino zhizha. Kupera kwemiromo ndeye matte, yemiromo yakapfava uye inogara kwenguva refu.
Aya maunganidzwa haakwanise kupotsa rumwe ruzivo rwekubatanidza zvipikiri nemagadzirirwo edu. Muunganidzwa uyu mune akawanda shades anga agara akapfekwa, kubva pamaruva akanaka kusvika kune yakadzika yakatsvuka tsvuku nguva dzose kuti munhu wese anoda uye matisingafaniri kuzeza kuisa mari. Sekutanga nhanho, tinofanirwa kuisa chigadziko chembambo chinodzivirira nzara dzedu kuti dzidzivirirwe kubva mukukuvadzwa nekushandisa kwenguva refu kwema enamel. Muunganidzwa ivo vafunga nezvemavara mana anosanganidzana nematoni eziso nemiromo. Korari, tsvuku, izwi uye violet. Chekupedzisira tine madonhwe ekukurumidza kuomesa nzara dzedu nekuzviita zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Dolce Diva muunganidzwa naKiko Milano yezhizha rino
Chii chinonzi dumbu diastasis
Matipi ekunakirwa nemazororo sevanhu vaviri